Sida loo Play MP4 on Galaxy S4 Si fudud
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play MP4 on Galaxy S4
Ha videos MP4 lagu ciyaari karo Samsung Galaxy S4? Inkasta oo aan si rasmi ah uu sheegay in Samsung Galaxy S IV (S4) taageertaa files MP4 ah, weli waxaa jiri doona waqtiyo aad ku guul dareysato lahaa inuu ka ciyaaro MP4 on Galaxy S4. Sababtu waxa weeye in files MP4 kala duwan yihiin encoded la audio iyo video codecs kala duwan. Si aad ha MP4 Galaxy S4 play, waxaad u baahan tahay qalab diinta video ah si loogu badalo MP4 in codecs MP4 ee la jaan qaada Galaxy S4. Just heli video ah Converter talinayaa hoose si aad u kaa caawin.
Beddelaan MP4 in Galaxy S4 Qaabka socon for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Si toos ah loogu badalo MP4 in Galaxy S4 ay taageerayaan codec MP4.
• In kor loo qaado MP4 video by falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm
• Ku dar metadata in MP4 si ay u sameeyaan videos sida kuwa soo iibsatay ka Lugood aad.
• video badaley ee tayo sare leh iyo u tayo khasaaro.
• Dufcaddii badalo degdeg ah diinta ugu dhaqsiyaha badan si loo badbaadiyo waqti iyo dadaal.
Beddelaan MP4 in Galaxy S4
Waxaa jira presets badan filaayo in qalabka kala duwan, sida Samsung, Apple, HTC, TV, iwm Waxaad sameyn kartaa Galaxy S4 sida qaab wax soo saarka iyada oo soo koobin adag.
Ku dar metadata in MP4
laga yaabaa in aad leedahay wax badan oo madevideos guriga ama videos soo bixi Internet. Hadda waxaad si fudud u edit karaa ama ku darto war aad videos, sida dabool, comment, sharaxaad, agaasimaha ama magaca actor, iwm
doonaysaa in ay ka wanaagsan MP4 video loo maqli karo? Hadda waxaad astaysto kartaa filim Hollywood, sida iftiinku ku qabsado, la barbardhigo, saturation ah, ama qaar ka mid ah dhibaatooyinka kale ee lagu qoslo.
​​Waxaad u bedeli karaan video caadi ah, HD video iyo video xitaa 3D xawaare ultrafast. Kasta oo file badan oo lagu samayn karo in dhawr miridh. Markaas ayaad ciyaari kartaa MP4 on Galaxy S4 goobtii.
Sida loo Beddelaan MP4 in Samsung Galaxy S4 Phones
Talaabada 1: shuban files MP4 in MP4 si Galaxy S4 video Converter
Waxaad riix kartaa batoonka "Faylal ay dar" on dhinaca kore ee midig ee interface ama si fudud u jiidi-iyo-hoos u faylasha aad u gal interface ka.
1. Barnaamijkan wuxuu taageeraa diinta Dufcaddii, sidaa darteed kaliya geliyaan files badan intii aad u baahan doontaa in loogu badalo
2. Haddii files MP4 yihiin qaar ka mid clips ka mid ah goobta, aad sax kartaa midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file doorasho waqtigan.
Talaabada 2: Dooro Galaxy S4 sida qaab wax soo saarka
Waxaad ka arki kartaa si fudud ugu qaabab file taageeray adigoo gujinaya guddi Qaabka wax soo saarka. Tag Device> Samsung category iyo aad u yeelan doontaa in ay helaan Galaxy S4 sida qaab wax soo saarka aad loogu talo galay. Wareejinta waxaa tixgelin doonaan oo ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ama lagu talinayaa in loo maqli karo qalabka in gaar ah.
Samsung Presets Available: Galaxy S4, Galaxy S II, III Galaxy S, Galaxy Tab, Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy S, Captivate, i7500, Moment, Galaxy Spica, Fascinate, Epic 4G, Mesmerize, dhexda, Mythic, Focus i917.
Tallaabada 3. Start MP4 in ay diinta ka Galaxy S4
Guji ka badalo button on geeska midig ugu hooseysa Converter tani ay u bilaabaan diinta video ah. Waxaa laguu sheegi doonaa oo fariin pop-up la sheegay in hawlaha lagu dhameystiro. Waxaad markaa riixi kartaa Folder Open hoose ee interface lagu soo celinayo files gediyay.
Hadda, aad wareejin karo files MP4 wax soo saarka si aad Galaxy S4, oo markaas ha play MP4 Samsung Galaxy S4!
Video Tutorial: Sida loo Play MP4 on Samsung Galaxy S4 la Video Converter Ultimate